FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA SCHNOODLE - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Schnoodle
Alika kely mifangaro Schnauzer / Poodle mifangaro
Cashew the Schnoodle (Mini Schnauzer / Poodle mix) amin'ny faha-9 taonany
Ny Schnoodle dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Miniature Schnauzer ary ny Poodle . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Sandy ilay olon-dehibe Schnoodle (Schnauzer / Poodle mix dog) - 'The Schnoodle dia tena tsy mivadika amin'ny fianakaviany, be fitiavana, tena manam-pahaizana, mora zatra , marani-tsaina, sariaka, be fitiavana ary be toetra! Tsara amin'ny ankizy izy ireo ary mifanerasera tsara amin'ny biby hafa. Izy ireo dia mpiambina tsara satria hampahafantatra anao izy ireo rehefa misy olona akaiky, saingy tsy masiaka izy ireo. Tsy alika mahafaty izy ireo raha tsy avelanao alao ny tranonao . Tian'izy ireo ny mitaingina fiara. Ity alika mpiara-miasa lehibe ity dia miavaka amin'ny fankatoavana, ny hakingana, ny Flyball ary mahomby alika fitsaboana , fa mpiara-dia mahatoky sy be fitiavana aloha izy ireo! Tsy maninona izy ireo ao amin'ny trano iray na amin'ny toeram-piompiana, raha mbola miaraka amin'ny fianakaviany izy ireo. Ireny alika ireny dia tsy mivadika sy be fitiavana ka tsy ho sambatra any ivelany. Raha ny fanatanjahan-tena, ny Schnoodle dia tena azo ovaina. Kilalao fakana sary nilalao tao an-trano na hazakazaka 5-kilaometatra, na iray amin'izy ireo dia tsara aminy. Satria ny Poodle sy ny Schnauzer dia samy tsy mandatsaka, ny Schnoodle dia tsy mandatsaka ka tsy maintsy kosehina isan-kerinandro izy ireo ary hokapohina isaky ny 6 ka hatramin'ny 12 herinandro, arakaraka ny halavan'ny volo no tiana. Tokony hohaingoina ny hoho. The Schnoodle mandatsaka kely tsy misy volo ary heverina ho tsara ho an'ny marary allergy . '
Schnoodle puppy, sary nomen'ny Ayers Pampered Pets
Schnoodle puppy, sary nahazoana lalana avy tamin'ny Wild Wood Acres
Charlie the Schnoodle amin'ny 8 herinandro— 'Lasa beige kokoa izy noho ny taonany (14 herinandro izao), mora vaky trano sy be fitiavana. Mazava ho azy fa mianatra ary afaka mandreraka ny filalaovany. Tena manontany tena ary tia mitsako ny kilalaony. Notsongaina haingana ny anarany, 'alaivo', 'mipetraha,' 'pee-pee' ary 'poopers' (na dia somary ambany kely aza). Nandray tsara ny fehy. Yappy kely miaraka amin'ireo mpiara-monina sy feo ivelany. Tia olona - mampiseho mora ny kibony. Milalao mafy amin'ny alika hafa ary tsy mizara kilalao tsara. Rehefa mihazakazaka amin'ny 'herin'ny alika kely' (eo anelanelan'ny hafainganam-pandehan'ny feo sy ny famonoana hamafana dia somary mafy loha izy — tsy mila miangavy kely kokoa. Matetika minia — hitanao mihodina ny kodia. Tsy nahita trondro volamena tao amin'ilay dobo kelinay izahay Matahotra izahay sao hanandrana ny fomba fahandro sushi azy tsy ho ela! '
'Avelao aho hampahafantatra anao an'i Arlington aka Arlie. Arlie dia Schnoodle Standard aseho eto amin'ny 9 volana. Ny reniny dia a Giant Schnauzer ary i Dada dia Mini Poodle .
'Arlie no tena manintona anao rehefa mandeha manerana ny renivohitry ny firenentsika (Washington, D.C.), izay 5 km miala ny tranonay any Arlington, VA. Tsy andro iray izay tsy anakanan'ny olona antsika hanontany hoe inona ilay alika Arlie. Raha ny marina, rehefa nilalao tamin'i Arlie sy nahita azy nandeha isan'andro , olona maro no nanontany momba an'i Schnoodles.
'Arlie dia manana zavatra roa ankafizina. Tiany ho voageja sy tiana izy. Soa ihany isika fa nahazo alika tia fifamihinana, oroka sy fifamonoana tsy misy farany. Tiany koa ny milalao tady amin'ny tady. Tsy maninona izay karazana tady raha mbola lava ary misy olona eo am-pita hafa. Hatsipiny ny tady rehefa anontaniana izy ary tena mora nampiofana. '
'Ity dia sarin'i Philippe the Schnoodle, alika noraisinay avy amin'ny Animal Control 8 herinandro lasa izay. 2 taona eo angamba izy. ny Fitsapana ADN nampiseho fa ny marika genetika misy azy dia mihoatra ny 75% Schnauzer ary mora ny mahita toetra vitsivitsy, indrindra amin'ny fomba fiheviny. Ny halavany dia lava be, ary ny volony malemilemy sy mikotrana. Tena be fitiavana izy, mazoto ary mazoto mianatra. 16 sm ny halavany eo an-tsoroka. '
Aloky ny palitao lava ny Schnoodle— 'Ity dia aloka. Schnoodle 14 volana izy. Nanavotra azy izahay. Manana toetra mahafinaritra izy ary manana haavon'ny angovo avo . Tiany ny mitaingina fiara sy manao sambo. Tsy tiany izany avelao irery . Alika mahatoky tokoa izy. Tiany ny milalao miaraka amin'ny zanakay ary tiany koa ny mifihina sy manome oroka be dia be. Alika mamy sy milalao izy. '
Aloka ny Schnoodle amin'ny faha-14 volana miaraka amin'ny palitaony vita fohy
Flora ilay Schnauzer / Poodle mifangaro mainty sy fotsy amin'ny 1 1/2 taona
Tibetana terrier Cocker spaniel afangaro
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Schnoodle
Sary Schnoodle 1
Sary Schnoodle 2
Sary Schnoodle 3
Sary Schnoodle 4
Sary Schnoodle 5
amerikana manga orona omby omby terrier
mainty sy fotsy papillon alika
Shih Tzu Mix miteraka lisitra
misy retrievers volamena kely ve
beagle sy mpiandry mpiandry alemanina